ရညျးစားဟောငျးကို ခဈြနသေေးတဲ့သူတှေ ဖတျဖို့
HomeLoveရညျးစားဟောငျးကို ခဈြနသေေးတဲ့သူတှေ ဖတျဖို့
ရညျးစားဟောငျးက ရညျးစားအသဈ ရသှားတာကို ဘာလို့ သဝနျတိုနေ မိတာလဲ ? ဘာလို့ နောငျတ ရမိသလို ဖွဈနတောလဲ ? ငါ သူနဲ့ ပွနျတှဲခငျြ သေးလား ?
ဟငျ့အငျး.. အဲ့ဒါလဲ မဟုတျသေး ပါဘူး။ ဒါဆို ငါ ဘာဖွဈနတောလဲ ? ဘာဖွဈခငျြ နတောလဲ ?
အဲ့ဒီ အဖွကေို ဥပမာလေးနဲ့ ပွောပွ ပါမယျ ။
ကြှနျမမှာ အရမျးကို လှတဲ့ ဖိနပျလေး တဈရံ ရှိပါတယျ။ အရမျးလညျး ဈေးကွီးတယျ။ လိုခငျြလှနျးလို့ ပိုကျဆံကို သခြောစုပွီး ဝယျထား တာလေး ပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ဖိနပျလေးက နညျးနညျးလေး သေးနတေယျ။ အပွငျကို သှားခါနီးတိုငျး စီးဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ ဘယျတော့မှ အဆငျမပွေ ပါဘူး။ သူမြားကို ပေးပဈ ဖို့လညျး အရမျးကို နှမွောမိလို့ မစီးဖွဈ ပမေယျ့ သိမျးထားတာပါ ။
တဈနတေ့ော့ စိတျကူး ပေါကျပွီး သူငယျခငျြး တဈယောကျကို ပေးလိုကျတယျ။ နောကျရကျ တှတေ့ော့ သူမက အဲ့ဒီ ဖိနပျလေးကို စီးလာတယျ လေ။ သူမနဲ့ အရမျးကို လိုကျပွီး အရမျးကို လှနေ ပါတယျ။ ဖိနပျလေး ကွောငျ့ သူမရဲ့ အလှက ပိုပီး ပျေါလှငျ သှားပါတယျ ။
ငါလညျး အဲ့ဖိနပျလေးကိုသာ ကွိုးစားပွီး ဝတျကွညျ့ရငျ အရမျး လှမှာပဲလို့ တှေးမိလာ ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဖိနပျလေးကို ယူပွီး ထပျစီးကွညျ့ တော့လညျး Size သေးနတေော့ ကမြ ခွထေောကျ အရမျးနာပွီး လမျးတောငျ မလြှောကျနိုငျလောကျ အောငျပါပဲ ။ ဘယျလိုမှ အဆငျမပွေ တာပါ ။ ဒါပမေယျ့ သူမနဲ့ ကတော့ သိပျလှ ပါတယျ။
အဲ့လိုပါပဲ။ ရညျးစားဟောငျး ဆိုတာ ဟာလဲ အမှတျတရတှေ အမြားကွီး ရှိဖူးတယျ။ အရာအားလုံး မွှုပျနှံပွီး ခဈြခဲ့ ဖူးကွတဲ့ သူတှပေါ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ပဲ တခွားသူ ဆီမှာ တှတေဲ့ အခါ ၊ တခွားသူဆီ ရောကျသှားတဲ့ အခါ ပိုကျဆံ အမြားကွီး ပေးထားတဲ့ ပစ်စညျး သူမြားကို ပေးရမှာ နှမွောမိသလို ခံစားခကျြ အမြားကွီး ပေးထားတဲ့ သူကို တခွားသူကို ပေးရမှာ နှမွောမိယုံ သကျသကျပါ ။
ငါ ခုနေ တဈခါလောကျ ထပျစီး ကွညျ့ရငျ ကောငျးမလားလို့ တှေးမိတိုငျး သငျ စီးခဲ့ တုနျးက ဘယျလောကျတောငျ နာခဲ့လဲ ပွနျ သတိရပါ။ အဲ့ ဖိနပျကို ခြှတျလိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ သငျ ဘယျလောကျ စိတျသကျသာရာ ရသှားတယျ ၊ နာကငျြ တာတှေ ပြောကျသှားတယျ ဆိုတာ ပွနျ သတိရကွညျ့ ပါ ။
သူတို့အတှဲ ပြျောနတေဲ့ ပုံတှေ fb မှာ တှတေဲ့အခါ သူငယျခငျြးတှကေ လာပွောပွတဲ့ အခါ တှမှောလညျး..
" ငါကတော့ ငတုံးပဲ ၊ တကယျဆို ဒါ ငါ့ဟာပဲ ၊ သူမြားကို မပေးသငျ့ဘူး။ ခုခြိနျ သူ့ရညျးစား အသဈက ပြျောနသေငျ့တာ မဟုတျဘူး ငါ ပြျောနရေမှာ " လို့ တှေးမိတတျ ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ အတှေးက တကယျတော့ မှားပါတယျ။ သူတို့ နှဈယောကျ ပြျောနေ ပမေယျ့ တကယျတမျး သူ ကမြ အနားမှာ ရှိရငျလညျး ကမြ ပြျောမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အစထဲက မတျောတဲ့ဟာ မို့လို့ပါ ။
အခုခြိနျမှာ သူမြားနဲ့ လှတာ မွငျတိုငျး ကိုယျနဲ့လညျး လှမယျ ၊ အဆငျပွမေယျ လို့ မတှေးမိတော့ ပါဘူး။ ကိုယျနဲ့ မတျောတဲ့ ဖိနပျကို သူမြား စီးထားလို့ လှတာ မွငျရငျလညျး ပွနျမလိုခငျြ တော့ပါဘူး ။ နှမွောတာ သကျသကျနဲ့ အနာခံပွီး လဲမစီးသငျ့ တော့ပါဘူး ။
တဈနေ့ မှာတော့ ကိုယျနဲ့ ကှကျတိ ဖွဈမယျ့ ဖိနပျ လှလှလေး တဈရံ တှေ့ဦးမယျ လို့ ယုံကွညျပါတယျ ။
ရည်းစားဟောင်းကို ချစ်နေသေးတဲ့သူတွေ ဖတ်ဖို့
ရည်းစားဟောင်းက ရည်းစားအသစ် ရသွားတာကို ဘာလို့ သဝန်တိုနေ မိတာလဲ ? ဘာလို့ နောင်တ ရမိသလို ဖြစ်နေတာလဲ ? ငါ သူနဲ့ ပြန်တွဲချင် သေးလား ?
ဟင့်အင်း.. အဲ့ဒါလဲ မဟုတ်သေး ပါဘူး။ ဒါဆို ငါ ဘာဖြစ်နေတာလဲ ? ဘာဖြစ်ချင် နေတာလဲ ?
အဲ့ဒီ အဖြေကို ဥပမာလေးနဲ့ ပြောပြ ပါမယ် ။
ကျွန်မမှာ အရမ်းကို လှတဲ့ ဖိနပ်လေး တစ်ရံ ရှိပါတယ်။ အရမ်းလည်း ဈေးကြီးတယ်။ လိုချင်လွန်းလို့ ပိုက်ဆံကို သေချာစုပြီး ဝယ်ထား တာလေး ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဖိနပ်လေးက နည်းနည်းလေး သေးနေတယ်။ အပြင်ကို သွားခါနီးတိုင်း စီးဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဘယ်တော့မှ အဆင်မပြေ ပါဘူး။ သူများကို ပေးပစ် ဖို့လည်း အရမ်းကို နှမြောမိလို့ မစီးဖြစ် ပေမယ့် သိမ်းထားတာပါ ။
တစ်နေ့တော့ စိတ်ကူး ပေါက်ပြီး သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို ပေးလိုက်တယ်။ နောက်ရက် တွေ့တော့ သူမက အဲ့ဒီ ဖိနပ်လေးကို စီးလာတယ် လေ။ သူမနဲ့ အရမ်းကို လိုက်ပြီး အရမ်းကို လှနေ ပါတယ်။ ဖိနပ်လေး ကြောင့် သူမရဲ့ အလှက ပိုပီး ပေါ်လွင် သွားပါတယ် ။
ငါလည်း အဲ့ဖိနပ်လေးကိုသာ ကြိုးစားပြီး ဝတ်ကြည့်ရင် အရမ်း လှမှာပဲလို့ တွေးမိလာ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖိနပ်လေးကို ယူပြီး ထပ်စီးကြည့် တော့လည်း Size သေးနေတော့ ကျမ ခြေထောက် အရမ်းနာပြီး လမ်းတောင် မလျှောက်နိုင်လောက် အောင်ပါပဲ ။ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ တာပါ ။ ဒါပေမယ့် သူမနဲ့ ကတော့ သိပ်လှ ပါတယ်။
အဲ့လိုပါပဲ။ ရည်းစားဟောင်း ဆိုတာ ဟာလဲ အမှတ်တရတွေ အများကြီး ရှိဖူးတယ်။ အရာအားလုံး မြှုပ်နှံပြီး ချစ်ခဲ့ ဖူးကြတဲ့ သူတွေပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ တခြားသူ ဆီမှာ တွေ့တဲ့ အခါ ၊ တခြားသူဆီ ရောက်သွားတဲ့ အခါ ပိုက်ဆံ အများကြီး ပေးထားတဲ့ ပစ္စည်း သူများကို ပေးရမှာ နှမြောမိသလို ခံစားချက် အများကြီး ပေးထားတဲ့ သူကို တခြားသူကို ပေးရမှာ နှမြောမိယုံ သက်သက်ပါ ။
ငါ ခုနေ တစ်ခါလောက် ထပ်စီး ကြည့်ရင် ကောင်းမလားလို့ တွေးမိတိုင်း သင် စီးခဲ့ တုန်းက ဘယ်လောက်တောင် နာခဲ့လဲ ပြန် သတိရပါ။ အဲ့ ဖိနပ်ကို ချွတ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သင် ဘယ်လောက် စိတ်သက်သာရာ ရသွားတယ် ၊ နာကျင် တာတွေ ပျောက်သွားတယ် ဆိုတာ ပြန် သတိရကြည့် ပါ ။
သူတို့အတွဲ ပျော်နေတဲ့ ပုံတွေ fb မှာ တွေ့တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေက လာပြောပြတဲ့ အခါ တွေမှာလည်း..
" ငါကတော့ ငတုံးပဲ ၊ တကယ်ဆို ဒါ ငါ့ဟာပဲ ၊ သူများကို မပေးသင့်ဘူး။ ခုချိန် သူ့ရည်းစား အသစ်က ပျော်နေသင့်တာ မဟုတ်ဘူး ငါ ပျော်နေရမှာ " လို့ တွေးမိတတ် ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ အတွေးက တကယ်တော့ မှားပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ပျော်နေ ပေမယ့် တကယ်တမ်း သူ ကျမ အနားမှာ ရှိရင်လည်း ကျမ ပျော်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အစထဲက မတော်တဲ့ဟာ မို့လို့ပါ ။
အခုချိန်မှာ သူများနဲ့ လှတာ မြင်တိုင်း ကိုယ်နဲ့လည်း လှမယ် ၊ အဆင်ပြေမယ် လို့ မတွေးမိတော့ ပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ မတော်တဲ့ ဖိနပ်ကို သူများ စီးထားလို့ လှတာ မြင်ရင်လည်း ပြန်မလိုချင် တော့ပါဘူး ။ နှမြောတာ သက်သက်နဲ့ အနာခံပြီး လဲမစီးသင့် တော့ပါဘူး ။
တစ်နေ့ မှာတော့ ကိုယ်နဲ့ ကွက်တိ ဖြစ်မယ့် ဖိနပ် လှလှလေး တစ်ရံ တွေ့ဦးမယ် လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။